10 Wallpaper Halloween ho an'ny PC sy Mac | Famoronana an-tserasera
Me encanta Halloween, ary isan-taona rehefa manakaiky ny alin'ny 31 Oktobra, na amin'ny Mac na amin'ny PC-ko, manova ny temotra aho hanomezana a fahatsapana mampatahotra ary miditra amin'ity andro atahorana ity. Ny andro dia matetika mifandray amin'ny loko volomboasary, mainty sy volomparasy, noho izany ny fiaviako izay omeko anao ny ankamaroany dia hanana ireo loko ireo.
Androany no itondrako anao ny Fiaviana 10 na ny sary an-tsary miaraka amin'ny Misy lohahevitra Halloween, fa mampatahotra tokoa. Tena izy ireo maizina sy manjombona. Ho fanampin'izany, ireo vola ireo dia azo ampiasaina tsy amin'ny PC ihany, amin'ny ankamaroan'ny Mac raha manana refy mifanaraka amin'izany izy ireo, ary raha manova azy ireo ianao, dia azo ampiasaina amin'ny sary finday ihany koa.
Tsindrio ny afara izay tianao, hisokatra ny sarin'ny lafika nosafidinao ary avy eo tsindrio ny bokotra havanana amin'ilay sary ary kitiho "save Image As", ary azonao atao ny misintona azy mivantana amin'ny PC na Mac anao. Avelanay eo akaikin'ny ambadiky ny refin'ny sary ianao, satria ny sasany raha mampiasa 27 ″ iMac ianao dia tsy ho tafiditra. Ho an'ity karazana iMac ity dia manome soso-kevitra ny momba ny Creepy Halloween aho.
1 Tanàna mampatahotra amin'ny fararano - lafiny 1280 x 1024
2 Fasan'ny Halloween - refy 1920 x 1152
3 Haunted Mansion - refy 1920 x 1080
4 Kianja katsaka Halloween- refes 1680 x 1050
5 Voatavo Halloween mampatahotra - refy 1600 x 1200
6 Fanangonana voatavo Halloween - refy 1280 x 1024
7 Voatavo Halloween amin'ny ala mahavariana- refes 1920 x 1200
8 Halloween mahatsiravina - refes 5000 x 2290
9 Halloween Autumn - refes 1920 x 1080
10 Scarecrow Halloween - refes 1280 x 768
Tanàna mampatahotra amin'ny fararano - lafiny 1280 x 1024
Fasan'ny Halloween - refy 1920 x 1152
Haunted Mansion - refy 1920 x 1080
Kianja katsaka Halloween- refes 1680 x 1050
Voatavo Halloween mampatahotra - refy 1600 x 1200
Fanangonana voatavo Halloween - refy 1280 x 1024
Voatavo Halloween amin'ny ala mahavariana- refes 1920 x 1200
Halloween mahatsiravina - refes 5000 x 2290
Halloween Autumn - refes 1920 x 1080
Scarecrow Halloween - refes 1280 x 768
Manantena aho fa tianao ireo Wallpaper 10. Fiarahabana.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » dia midika hoe » sary » 10 Wallpaper Halloween ho an'ny PC sy Mac
Ana Web Designs dia hoy izy:
Tiako izy ireo, mahafinaritra daholo izy ireo, ary ity no iray amin'ireo antoko tiako indrindra. Efa nisintona ny sasany amin'ireto fiaviana ireto aho hanavaozana ny rindrina pc sy ny fonoko facebook.
Valiny amin'ny tranokala Ana Diseños
Faly aho fa tianao i Ana, tena milay ry zareo.